USimona-Kumnandi ngaphambi komthandazo ... -Ukuhla uye eBukumkanini
USimona - Kumnandi ngaphambi komthandazo…
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona NgoSeptemba 8th, 2021:
Ndabona uMama; Wayenxibe ezimhlophe zonke, entloko kuye sisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini kunye nengubo emhlophe ekwagquma amagxa akhe wehla waya ezinyaweni zakhe, ezazize kwaye zibekwe emhlabeni. Iingalo zikaMama zazivulekile njengophawu lokwamkelwa kwaye kwisandla sakhe sasekunene kukho irosari ende ende engcwele ngokungathi iphuma kumathontsi omkhenkce. Makabongwe uYesu Kristu.
Bantwana abathandekayo, ndaphinda ndeza kuni ndicela umthandazo, kodwa yeha, bambalwa abantwana bam abandimamelayo kwaye basebenzise icebo lam. Bantwana bam, musani ukukholwa ukuba iNkosi iyayidinga imithandazo yenu; zezakho ukomeleza ukholo lwakho, ukukunceda, ukuqinisekisa ukuba awuphambuki, ukuze ungalahleki kubuxoki beli hlabathi. Bantwana bam, uhlala ufumana ixesha lezinto ezininzi, ngenxa yezinto zakho ezininzi ezonwabisayo, kodwa ngokufuthi ngokufuthi awunalo ixesha leNkosi, leemisakramente, zomthandazo. Bantwana bam, umthandazo sisixhobo esinamandla ukulwa ububi. Bantwana bam, uThixo uYise ulungile kwaye ulungile, uyakubona oko ninako ezintliziyweni zenu kwaye uya kunika umntu ngamnye oko kufanelekileyo. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama ukuza kum.
← UGisella - Indlala iseGates
Angela - Kuza kubakho… →